Ukufunda itheyibhile yokuphindaphinda ka-9 ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kubaluleke kakhulu ukuba uqaphele i ukuphindaphinda iitafile kwaye uzibambe ngentloko, izinto ezininzi ziya kuba lula kufundisiso lwemathematics.
Nangona kunjalo, inkqubo yokuhombisa ayisiyonto ilula kuwo wonke umntu, ngenxa yoko amaqhinga ambalwa aphuhlisiwe kwabo balwa netafile ka-9.
Nangona kunjalo, sinamaqhinga aya kukunceda ukuba unqobe itafile yamaxesha e-9 kwaye ube nolonwabo lokufunda.
Emva kwezi ngcebiso, unokuhamba ngokuzithemba ungene kwigumbi lokufundela kwaye wazise oogxa bakho ngendlela owafunda ngayo ngokukhawuleza itafile yamaxesha ali-9.
1 Ungajonga njani itafile yokuphindaphinda ngezandla zakho?
Ungajonga njani itafile yokuphindaphinda ngezandla zakho?
Asinakho ukukhuphela itafile yokuphindaphinda kwiimvavanyo, akunjalo? Kodwa kwabo basokolayo netafile yamaxesha ali-9, nantsi incam elula kakhulu:
Vula zozibini izandla kwaye wolule iminwe yakho. Ngamnye wabo uya kubonisa inani ukusuka kwi-1 ukuya kwi-10, ngokulandela umyalelo womfanekiso ongentla.
Emva koko, khetha inani ofuna ukulibona liphindaphindeka: umzekelo, 9 x 5. Gobela umnwe oboniswe linani lesihlanu, eli limiswe kumfanekiso ongaphambili, uyakhumbula? Emva koko siya kuba neziphumo ezilandelayo:
Iminwe ekunene komnwe ogotyiweyo, izakumela ishumi lempendulo, kunye neminwe ekhohlo, zimele iiyunithi zesiphumo: ke, 9 x 5 = 45. Unayo?
Ukuba awukayiqondi, bona omnye umzekelo: 6 x 9.
Vula izandla zakho kwakhona njengoko kubonisiwe kwinyathelo lokuqala apha ngasentla. Goba umnwe oboniswe kwinani 1. Ngoku isandla sakho kufuneka sijongeka ngoluhlobo:
Kwakukho iminwe emi-5 ngasekunene komnwe ogobileyo, omele ama-50, kunye neminwe emi-4 ngasekhohlo, emele iiyunithi ezi-4, enika ixabiso lama-54.
Elinye icebo lokucebisa abantu: ukuba ufumanisa kunzima ukukhumbula ukuba yeyiphi iminwe emele ntoni, bhala ngosiba kumnwe ngamnye, akunjalo?
Kukwakho neengoma ezinceda ukukhumbula ngentloko, kwabo banememori yangaphakathi, okanye eziphuhlisiweyo ukonwabisa abantwana. Jonga amazwi kunye nengoma eculiweyo.
9 amaxesha itafile
Ndifunde enye, ezimbini, ezintathu, ezine, ezintlanu nezintandathu, isixhenxe nesibhozo
Kwaye andizukuma kude kube lithoba ukuze ndiphindaphinde
Ithoba kuye kwethoba lithoba
Zimbini, zilishumi elinesibhozo
Ithoba nge-XNUMX, amashumi amabini anesixhenxe
Amashumi amathathu anesithandathu anesine
Ithoba ukuya kwisihlanu amashumi amane anesihlanu
Isithandathu, amashumi amahlanu anesine
Kwaye andizukuma kude kube lithoba ukuba andiphindi
Ithoba ukuya kwisixhenxe, amashumi amathandathu anesithathu
Thoba amaxesha asibhozo, amashumi asixhenxe anesibini
Thoba amaxesha alithoba amashumi asibhozo ananye
Ithoba ukuya kwelishumi elinamashumi alithoba
Izihlandlo ezisithoba zilishumi elinanye elinamashumi alithoba anesithoba
Ithoba ukuya kwishumi elinamakhulu amabini anekhulu elinesibhozo
Isixhenxe kunye nesibhozo kwaye andizukuma kude kube lithoba kwaye andiphindi.